Siyaasiyiin kasoo jeedda gobolka Mt Kenya oo ku hanjabay in ay isaga baxayaan xisbiga Jubilee – The Voice of Northeastern Kenya
Siyaasiyiin kasoo jeedda gobolka Mt Kenya oo ku hanjabay in ay isaga baxayaan xisbiga Jubilee
In ka badan 50 siyaasi oo ka mid ah kuwa u hanqal taagaya xilalka siyaasadeed ee doorashada xigta oo kasoo jeeda gobolka Mt Kenya ayaa ku goodiyay in ay faarujin doonaan xisbiga talada dalka haya ee Jubilee, kadib markii ay iska waayeen liiska dad lagu casuumay in ay ka qeyb galaan shirka uu xisbiga yeelanayo 10-ka bisha September.
Siyaasiyiintaan ayaa sheegay in ay raadin doonaan waddo kale oo u furan, maadaama ay ka cabsi qabaan in laga qadiyo magacaabista tartamada kuraasta siyaasadeed ee loo sameyn doono xisbiga Jubilee.
Wambugu Nyamu oo ah siyaasiga u hanqal taagaya inuu u tartamo kursiga Senete-ka ee maamul goboleedka Nyeri ayaa isagoo ku hadlayay afka siyaasiyiinta kale ayaa arrintaan ka shaaciyay kulan ka dhacay hotelka Greenhills.
Sidoo kale gudoomiyaha kooxdaan siyaasiyiinta ah oo lagu magacaabo Machira Gichohi oo isagana u hanqal taagaya inuu badalo Gavanarka Nyeri Nderitu Gachagua ayaa sii ayiday hadalkaasi.
Xilalka siyaasadeed ee ay siyaasiyiintaan isha ku hayaan ayaa waxaa intooda badan doonaya in ay mar kale ku laabtaan hogaamiyeyaasha horay loogu soo doortay doorashadii dalka ka dhacday sanadkii 2013-ki, kuwaasoo dhamaantood ka wada tirsan isbahaysiga talada haya ee Jubilee.
Gavanarka Nyeri Nderitu Gachagua oo ka tirsanaa xisbiga GNU ayaa dhawaan aqbalay in uu xisbigiisa kala diro kadibna ay ku biiraan xisbiga JAP ee ay hor kacayaan madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ku xigeenkiisa William Ruto.
← Ciraaq oo xukun dil ah ku fulisay in ka badan 30 qof
Golaha imaamyada Kenya ee CIPK oo lagu boorriyay in ay midoobaan, kana hor tagaan xagjireynta Dhalinyarada →